« Orange Esport Experience »: tompondakan’i Afrika Rakotoarison Mamitiana | NewsMada
Tsara ny vokatra ho an’i Madagasikara. Tompondaka Rakotoarison Mamitiana ary tompondaka lefitra kosa Ralainaivo Mamitiana Herilanto, tamin’ny sokajin-dalao nisy azy avy. Niakatra ny haavo teknikan’ny mpilalao “jeu vidéo” malagasy, raha ireo vokatra ireo no jerena.
Nahita fahombiazana ny solontena malagasy niatrika ny lalao famaranana tamin’ny fifaninanana “Esport Orange Experience”, notontosaina tao amin’ny lapan’ny Kongresy “King Fahd” tao Dakar. Lalao “jeu vidéo” izay natao omaly alakamisy hariva. Nandrombaka ny amboara tamin’ny sokajy “Asphalt 9” , Rakotoarison Mamitiana. Tsiahivina fa “jeu vidéo” miisa 4, dia ny “Pro Evolution Soccer 2019”, “Asphalt 9”, “Street Fighter V” ary ny “Arena of Valor” no hifaninanan’ireo mpifaninanana miisa 50 ary ny 3 amin’ireo no nananan’ny Malagasy solontena.
Nandravarava ary nanamarika isa ambony i Mamitiana nanoloana ny mpifanandrina taminy, Emmanuel Weaver avy any Kameronina. Nisesy ny fandresena nandritra ny dingana telo ho an’ity solontena malagasy ity ary tsara ny vokatra satria vitany tao anatin’ny 12’46’’ ireo dingana telo ireo, raha toa ka 12’54” no nanaovan’ilay Kameroney izany. Vokatr’ity fandresena ity, nahazo vola mitentina 1500 euros Rakotoarison Mamitiana.
Tompondaka lefitra “PES 2019” i Rayan
Namiratra i Madagasikara tamin’ny fifaninanana ity satria tafakatra tamin’ny dingana famaranana, sokajy “PES 2019” ihany koa Ralainaivo Mamitiana Herilanto, fantatra amin’ny solon’anarana hoe Rayan ary tompondaka lefitra amin’ity sokajy ity. Tsy afa-bela nanoloana azy ilay Ivorianina antsoina hoe Hermann, hatrany am-piandohan’ny fifanandrinanana. Nanjakan’i Rayan tanteraka ny 20 minitra nilalaovana ary izy no nanokatra ny isa. Nanejika azy hatrany i Hermann, saingy tsy nahatohitra firy. Nisaraka tamin’ny isa 3 no ho 2 ny roa tonta teo am-pialana sasatra. Vao maika nihanahazo hery i Rayan nandritra ny ampaham-potoana faharoa ary nanamarika isa iray indray, 5 minitra tsy hifarananan’ny lalao. Isa 4 no ho 3 no nisarahan’izy ireo tamin’ny ora farany.
Ratsy kosa ny vokatra ho an’ilay mpilalao malagasy iray, Ratsimiliavahoaka Ranto Manoro, sokajy “Street Fighter V”. Raraka teo amin’ny lalao fifanintsanana ho an’ny 8 voalohany izy ary tsy afaka nanohy intsony ny fifaninanana.
Marihina fa hitodi-doha eto an-tanindrazana, anio, asabotsy 8 desambra ireto mpilalao “jeu vidéo” malagasy, 3 mirahalahy, ireto.